Montecarlo egwuregwu ọfịs oche nyochaa | Esi m mac
Montecarlo sports office oche nyochaa
M na a ọhụrụ otu maka otu izu na tebụl ebe m nwere m Mac na m chọrọ ịkọrọ gị niile mkpa ya. Mba, ọ bụghị ihe ọhụụ na otu ị ga - esi hụ ya na isi isiokwu nke isiokwu a, oge a ka anyị ga - eso gị kọwaa ahụmịhe oche ọhụrụ nke ga-eso m ruo ọtụtụ awa na tebụl dị n'ihu Mac.
Mana anyị na-aga n'akụkụ dị ka enyi ochie nke ndị hụrụ ihe nkiri kwuru. Nke mbụ na enweghị mgbagha bụ igosi mkpa ọ dị ịnwe ezigbo oche na tebụl dị n'ọfịs anyị, ọfịs ma ọ bụ tebụl ụlọ na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị ga-eji ọtụtụ awa nọdụ ebe ahụ, nke a bụ ihe mbụ anyị ga-enyocha. Ọ bụrụ na anyị anaghị arụsi ọrụ ike n'ihu Mac ma ọ bụ PC, mgbe ahụ oche ọ bụla nwere ike ịnwe aka iji nọrọ ọdụ nwa oge, mana ọ bụrụ na anyị ga-anọ ogologo oge n'ihu ihuenyo nhọrọ ahụ enweghị ike ịbụ ihe ọjọọ ma ọ bụ ahụ anyị ga-ahụ ya n'ikpeazụ.
N'okwu m, enwere m ike ikwu na ọ bụrụ na m na-etinye oge zuru ezu n'ihu Mac m n'ọfịs na ọ bụ ya mere nhọrọ nke oche ahụ dị oke mkpa ka azụ m na ahụ m «anaghị emerụ ahụ» mgbe ọtụtụ awa nke ọrụ. Oche anyị na-eji kpụ ọkụ n'ọnụ ga-adị mma, na ọ na-enye anyị ohere nke imeghari iji nọgide na-enwe ọkwá dị mma nakwa na ọ na-ejide ya n'ụzọ zuru oke ụbọchị ọrụ. N'okwu a, oche ahụ bụ ihe atụ emere maka ndị ọrụ ahụ niile masịrị "oche ndị ọzọ egwuregwu ma ọ bụ nke na-adịghị njọ" maka ọfịs ma ọ bụ ụlọ ma wepụta oge na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-egwu n'ihu kọmputa.
1 Nhazi oche
2 Ejiri agba
3 Ọrụ oche
4 Emecha na ego
Na nke a, anyị ga - ebido n’ichepụta oche na ụdị ma ọ bụ agba ndị anyị nwere maka ya. Ọ bụ oche «baquet style» oche. otú ndị na-eji na-agba ọsọ ụgbọala na otú fashionable ha taa, azọpụta ọdịiche na ọduọ oche na okwu nke nkasi obi, doro anya. Ọ nwere obere oghere eji achọ mma n'akụkụ elu nke oche ahụ na ọdịdị nke ebe anyị na-akwado azụ bụ ergonomic kpamkpam nke mere na lumbar anyị na-akwado ya n'ụzọ zuru oke mgbe anyị nọdụrụ ala.
N'aka nke ọzọ, ekwesiri ịsị na o nwere ohere zuru ezu maka azụ iji daba nkasi obi na azụ azụ ekele ya 44 cm n'obosara nke oche ahụ nwere, mana ọ bụghị otu n'ime nnukwu anyị nwere n'ahịa, yabụ buru ezigbo ileba anya na nkọwa ndị a bụ isi. O doro anya na ị ga-ahụ ma gụọ nkọwa zuru ezu Tupu launching n'ime zuo nke ọ bụla ngwaahịa na ọ bụ ihe ezi uche dị na anyị na-eme ya ka ịlele ma ọ bụrụ na a oche bụ obosara ezuru anyị idem.
Mgbe anyị na-ekwu maka agba anyị amatala ihe a na-ekwukarị na nke ahụ bụ na onye ọ bụla nwere uto ha. N'okwu a, a na-ewepụta oche Montecarlo na agba atọ dị iche iche, ojii, ọbara ọbara na oroma, ha niile nwere elu mma poli akpụkpọ anụ ihe onwunwe. Na agba atọ ọ dị mkpa iji mesie ike na n'akụkụ etiti nke oche anyị ga-enwe agba ntụ. Colorsdị atọ dịnụ nwere ọcha na azụ na oche, iji nye mmetụ ahụ dị iche na ụdị oche ahụ yana nke ahụ n'onwe ya nwere ike ịbụ otu igodo nke oche a na-adọta anyị ntakịrị karịa. Ọ bụrụ na ndị ọzọ bụ otu ụdị nwere naanị agba abụọ, ọ ga-ekwe omume na ọ ga-enye gị ihe ka njọ, ma n’otu oge ahụ ọ ga-abụ ihe na-adịchaghị mkpa n’uche m.
Nkọwa ọzọ nke na-enyekwu agba agba n’oche ahụ bụ nkedo nke ọ na-eweta n’ozuzu ya. N'ime agba atọ dị na oche Montecarlo a, onuete bu ocha ọ na-enyekwa oche ahụ ihe mara mma ma dị egwu nke na-agaghị ahụkarị ma anyị nwere ya n'ụlọ. Ihe na-ezighi ezi n'echiche a bụ na agba nwere ike ime ka ọ dị ọcha karịa oge ma ọ bụ ọbụbụ na-atụgharị site na ịpị bọtịnụ nke uwe ogologo ọkpa anyị ma ọ bụ nke yiri ya.
Oche a dị ka ọtụtụ ndị ọzọ anyị na-ahụ n’ahịa banyere nhọrọ ndị ọ na-enye anyị ka anyị dozie ya na elu ma gbochie azụ azụ ka ọ ghara ihulata. Ọ nwere ahụkarị lever na ala akụkụ nke oche na-enye anyị ohere ịgbanwe elu ruo nke kachasị 57 cm si na ala ekele Toplift. N'aka nke ọzọ, ekwesiri iburu n'uche na ụdị oche ndị a ka a ga-anọdụ ala na azụ kwụ ọtọ, yabụ mgbe anyị chọrọ ịgha ụgha ma ọ bụ tụgharịa azụ azụ ọ na-enye anyị obere akụkụ n'agbanyeghị na ọ dị ezigbo mma. Banyere nhọrọ a, ekwesịrị ikwu na na mbido ọ ga-esitụrụ ike karịa ka ọ dị, na oge nke iji ike dị mkpa iji kpatọọ ọ ga-adị obere karia mgbe anyi malitere ya.
Na mgbakwunye na nke a niile, ọ nwere ihe na-adọrọ mmasị na arụmọrụ nke opekata mpe m, ogwe aka abụọ nke oche ahụ nwere ike ịmegharị, ya mere, ọ na-enye anyị ohere iweda ha ma ọ bụ bulie ha ka ha masị anyị ọbụnadị n ’otu maka nkasi obi ka ukwuu mgbe anyị biliri ọtọ ma ọ bụ ịnọdụ ala. Nke a na-adọrọ mmasị maka ndị na-eme ha, dị ka m, na n'ọtụtụ oge, okpokoro ahụ na-emetụ "n'ịdị elu" na ogwe aka nke oche ahụ ma nwee ike ibuli ha mgbe niile bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị.
Emecha na ego
Eziokwu bụ na iburu n'uche ọnụahịa oche a, anyị nwere ike ịche na ọ gaghị enwe ezigbo mmecha ma ọ bụ ịnwere ike iche na ọ bụ oche dị mfe. Ọ bụ ezie na ọ nwere ụfọdụ nkọwa nwere ike ịka mma na usoro nke upholstered ala akụkụ nke oche -nke ị na-apụghị ịhụ ma ọ bụrụ na ị gbanwee ya- ma ọ bụ ọbụna ahunsenwu na ala nke azụ azụ nke ahụ adịghị emetụta nkasi obi ya ma ọlị, ha bụ obere nkọwa nke, na-eburu n'uche uru ego nke ụdị Montecarlo na-enye anyị, yiri ka ọ baghị uru.
Nke a Montecarlo Sports Office oche nwere ezigbo mma ọnụahịa maka ndị niile, dị ka m, chọrọ mgbanwe nke oche ma ọ bụ na-eche echiche ịzụta otu. Eziokwu bụ na ọ nwere ọnụahịa dị iche iche ma ọ bụrụ na anyị elee anya na ntanetị ma anyị achọtala ego kacha mma na Ofisillas.es nke a ịbụ 149,90 na mbupu n'efu na ụbọchị 3-5. Oche ndị dị ka nke a nwere ike ịdị ihe dị ka euro 200 ma ọ bụ karịa, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na nke a abụghị oche nwere atụmatụ pụrụ iche ma ọ bụ mechaa ezigbo akpụkpọ anụ, Montecarlo bụ oche nwere ọnụ ahịa na-adọrọ mmasị.
N'oge a yana nkọwa niile dị na tebụl, anyị nwere ike ikwu ntakịrị banyere echiche onwe m mgbe ụbọchị ole na ole soro ya. Ihe mbụ na tupu inye echiche, anyị ga-ekele ụlọ ọrụ maka ịdị mkpa, ọkachamara na ọsọ nke izipu ụdị oche a. weebụ Ofisillas. Na nyocha ikpeazụ m na-ahapụ njikọ kpọmkwem na oche m nwere n'ụlọ ka ị nwee ike ịzụta otu ihe ahụ ma ọ bụ agba ịchọrọ karịa site na atọ dị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchọọghị ihe nlereanya a nke oche, ịnwere ike ịchọgharị site na ọnụ ọgụgụ nke ụdị ha nwere na ụlọ ahịa dị na Ofisillas na mgbakwunye na ụdị ụlọ ọrụ ọfịs niile.
Nke ahụ kwuru, ihe fọdụrụ ka anyị kwuo bụ naanị mmetụta nke oche a na-enye m mgbe ụbọchị ole na ole jiri, nke bụ n'ezie ihe dị anyị mkpa mgbe anyị jiri ọtụtụ awa nọ ọdụ n'oche. Enwere m ike ịsị na ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na oge niile oche niile na-efunahụ ihe mbụ ndị ahụ dị ka nke zuru oke nye anyị, mmetụta ahụ dị mma, dị mma. N'oge mbụ mgbe m gbakọtara oche (dị mfe na mpempe akwụkwọ ntụziaka ya) wee nọdụ na ya, enwere m ike ịhụ na ụfụfụ ahụ na oche na akụkụ lumbar, ha ga-aru oru oma idebe azu m n'ihu Mac.
Nke nta nke nta na ka ụbọchị na-aga, ahụ m agbanweela n'ụzọ zuru oke na oche ahụ ma ọ bụ eziokwu na na mbụ mgbe ịnweghị oche nke ụdị a ị nwere ike iche na ọ siri ike, mana n'eziokwu emesia ị nwere ekele ekweghị ekwe nke oche ahụ n'onwe ya ịnọ ogologo oge na ya. N'ezie Na weebụsaịtị Ofisillas, ọ na-egosi na ọ bụ oche pụrụ iche ka eji 8 awa ụbọchị, M onwe m abụghị ndị 8 awa ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na gị nkasi obi mmemmem a ga-ekwe omume. Ọ bụkwa eziokwu na ndị ọkachamara na-atụ aro ibili kwa elekere ma ọ bụ karịa n'agbanyeghị ụdị oche, ịgbatị ụkwụ maka otu nkeji wee nọdụ ala ọzọ.
Easedị mfe anyị nwere ike bulie ma wedata ogwe aka na mgbakwunye egwuregwu a na-enye anyị, dị mma. Dum nke oche ahụ dị ezigbo mma na Mbipụta dị ezigbo mma n'ozuzu ya, ya mere enweghị m nhọrọ ma ọ bụghị ịnụ ụtọ oche m. Dị ka anyị na-eme mgbe niile, anyị na-ahapụrụ gị nyocha n'ozuzu ya na ụzọ a chịkọtara banyere uru nke oche ahụ na njikọ njikọta na ụlọ ahịa ntanetị nke Ofisillas maka ndị chọrọ ịzụta ihe nlereanya a nke oche nwere ike ịme otu pịa.
MONTECARLO Egwuregwu Office oche
Montecarlo oche njikọ
Ngwunye ogwe aka
Debe n'okpuru oche
Ala azụ ndọlị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Montecarlo sports office oche nyochaa
Azụrụ m otu maka 100 n'ọkwá (euro 28)
Na PcComponentes € 79,95
Na PcComponentes otu oche € 79,95
José Silla dijo
Ekwenyere m kpamkpam. Oche dị ezigbo mkpa. Ma mgbe m gbalịrị ọtụtụ oche, nke m bụ oche oche. Ndụ m agbanweela. Ọtụtụ awa ọdụ n'ihu kọmputa. Nke a bụ nzọpụta. Nwere ike ịchọta ya na Espriu.
Zaghachi Jose Silla
arịa ụlọ ọrụ dijo
Nhọrọ dị oke mma, ha niile n'ọfịs ma ọ bụ oche oche
Zaghachi na arịa ụlọ ọrụ
A ezigbo oche oche dị mkpa iji rụọ ọrụ nke ọma
Zaghachi Pedro Sillas
Ihe ndekọ ederede, n'efu maka obere oge
Gọọmentị China ọ ga-anabata arịrịọ Tim Cook?